Maxay yihiin Siyaabaha Ugu Fiican ee Loogu Dhiiri Galiyo Webinar-kaaga?
Jimco, Diisambar 20, 2013 Saturday, May 7, 2016 Jenn Lisak Golding
In 2013, 62% ee B2B waxay isticmaaleen webinar si kor loogu qaado magacyadooda, taasoo ka sarreysa boqolkiiba 42% sanadkii ka horreeyay. Sida iska cad, websaydhku waxay helayaan caan waxayna yihiin u shaqeeya sidii aalad hoggaan jiil ah, maahan kaliya qalab suuq geyn. Maxaad ugu soo dari kartaa qorshahaaga suuq-geynta iyo miisaaniyadda? Sababtoo ah websaydhyadu waxay u sarreeyaan qaabka ugu sarreeya ee wadista hoggaanka u qalma.
Dhawaan, waxaan la shaqeynayay macmiil iyo xalka webinar heegan ah, ReadyTalk, oo ku saabsan qaar ka mid ah waxyaabaha loogu talagalay dhaqanka webinar ee ugu fiican iyo sababta qiimaha halkii horseed u mudan yahay. Kaliya maahan inaan helay stats webinar oo weyn, laakiin waxaan ku fulin doonnaa taxanaheenna shabakadda ee soo socda kafaalaqaadka qalabka kormeerka bulshada, Meltwater (la soco!).
Marka, halkan waxaa ah 10ka talooyin ee kor u qaadista webinar ee ay tahay inaad raacdo markii aad qorsheyneyso webinar-kaaga soo socda:
Bilow inaad kobciso websaydhkaaga ugu yaraan hal usbuuc ka hor dhacdada - Si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican, ka billow saddex toddobaad. Inkasta oo inta badan dadka diiwaangashan ay isdiiwaangelinayaan usbuuca webinar, taasi macnaheedu maahan inaadan bilaabin inaad hore u sii dallacdo. Sida laga soo xigtay Warbixinta 2013 Webinar Benchmark, Bilaabidda dallacaadda ugu yaraan toddobo maalmood oo ka baxsan waxay kuu kordhin kartaa diiwaangelinta in ka badan 36%! Boqolleyda waxay bilaabaan inay hoos udhacaan, iyadoo 2 ilaa 7 maalmood ay yihiin 27%, maalin kahor kahor 16%, iyo maalintii oo ah 21%.
U isticmaal emaylka habkaaga aasaasiga ah si aad ugu dhiirrigeliso webinar-ka - Sida laga soo xigtay cilmi baarista ReadyTalk, emaylku wuxuu weli yahay habka ugu sarreeya ee kor loogu qaado webinar, oo leh 4.46 ka mid ah 5. Habka labaad ee ugu sarreeya ee kor loogu qaado wuxuu ahaa warbaahinta bulshada, taas oo ku dhowaad laba dhibcood ka hooseysay 2.77. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa boggaga dhiirrigelinta Webinar sida Maskaxda Octopus.
Markay tahay webinars, 3 waa nambarka sixirka ee ololeyaasha emaylka la geeyo - Maaddaama aad bilaabayso dhiirrigelinta websaydhka ugu yaraan hal toddobaad, saddex ololeyaal emayl ayaa ah tirada ugu wanaagsan ee kor u qaadista webinar:
U dir hal olole bilow ah si aad ugu dhiirrigeliso websaydhkaaga, adigoo ka hadlaya mawduuca iyo dhibaatada ay u xallin doonto kuwa ku dhageysta khadka maaddada.
U dir emayl kale dhawr maalmood kadib laynka mawduuca oo ay kujiraan cid kasta oo martida kuhadasha ama luuqad natiijooyinku wadaan
Dadka mar hore isdiiwaangaliyay, dir emayl maalinta munaasabada si loo kordhiyo xaadiritaanka
Dadka wali u baahan inay isdiiwaangaliyaan, u soo dir iimeel maalinta munaasabada si loo kordhiyo diiwaangelinta
Ma ogeyd? Celceliska heerka beddelka loogu talagalay diiwaan-ka-qaybgale waa 42%.
E-mayl u dir Talaadada, Arbacada, ama Khamiista - The maalmood oo leh diiwaangeliyaasha ugu badan waa Talaado oo leh 24%, Arbacada oo leh 22%, iyo Khamiista oo leh 20%. Ku dhaji bartamaha toddobaadka si aad u hubiso in emaylladaada aan la iska indhatirin ama la tirtirin.
Ma ogeyd? 64% dadku waxay iska diiwaangeliyaan websaydhka usbuuca dhacdada tooska ah.
Marti geliso websaydhkaaga maalinta Talaadada ama Arbacada - Iyadoo lagu saleynayo baaritaanka iyo xogta ReadyTalk, maalmaha ugu wanaagsan ee usbuuca ee martigelinta websaydhka waa Talaado ama Arbaco. Sababta Sababtoo ah dadku waxay qabsanayaan Isniinta, waxayna diyaar u yihiin dhammaadka usbuuca illaa Khamiista.
Ku marti qaado websaydhkaaga 11AM PST (2PM EST) ama 10AM PST (1PM EST) - Haddii aad leedahay webinar qaran, markaa kan Waqtiga ugufiican ee loo fududeeyo jadwalka qof walba umadda waa 11AM PST (22%). 10AM PST ayaa ku jirta kaalinta labaad iyadoo leh 19%. Markay u dhowdahay saacadda qadada, ayay u yar tahay inay dadku shirarka galaan ama ay subaxda qabsadaan.
Had iyo jeer, had iyo jeer, had iyo jeer hayso websaydhkaaga oo aad ku heli karto dalab dhacdada ka dib (oo kor u qaad inaad sidaas samayn doonto). - Sida aan wada ogsoonahay, waxyaabo lama filaan ah ayaa kusoo bixi kara jadwalkayaga. Hubso in dadka kuu diiwaangashan ay ogaadaan inay marin u heli karaan websaydhka dalabka, haddii aysan awoodi karin inay ka qayb galaan ama haddii ay doonayaan inay mar dambe dhegeystaan.
Ku xaddid foomkaaga diiwaangelinta 2 illaa 4 foom oo foom ah. - Diinta ugu sarreysa foomamku waxay u dhexeeyaan 2 - 4 foomam beero, halkaasoo beddelka uu ku kordhin karo ku dhowaad 160%. Waqtigaan, celceliska heerka beddelka marka qof gaaro bogga degitaanka webinar waa kaliya 30 - 40%. In kasta oo ay u muuqan karto mid duufsan inaad weydiisato macluumaad dheeri ah foomka si aad si fiican uguqalanto rajooyinka, waxaa ka muhiimsan inaad uhesho websaydhka halkii aad uga baqi lahayd foomam aad u tiro badan. Kaas oo ii keenaya dhibicdayda soo socota…
Adeegso codbixinta iyo Su'aalaha iyo Jawaabaha si aad u ururiso macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan rajadaada. - 54% suuqleyda ayaa adeegsaday su'aalo si ay ula macaamilaan dhagaystayaashooda iyo 34% codbixinno la isticmaalay, sida laga soo xigtay xogta ReadyTalk. Tani waa halka aad si dhab ah uga bilaabi karto wadahadalka rajooyinkaaga oo aad waxbadan ka baran karto. Iyo, ugu dambeyntii…
Kusoo celi waqtiga-dhabta ah. - Kahor intaadan sameyn webinar-ka tooska ah, hubi inaad diyaar u tahay inaad ku celiso waxyaabaha ku jira waqtiga-dhabta ah si aad u kordhiso kaqeybgalka oo aad ugu dhiirrigeliso kuwa kale inay xiiseeyaan:
89% dadku waxay u rogaan webinar boostada boostada. Hubso inaad jadwal u sameyso mid si dhaqso leh u baxa kadib webinar-ka, iyadoo xiriiriyaha uu diyaar u yahay dhagaystayaasha webinar inuu tixraaco haddii ay u baahan yihiin. Tilmaamo Dheeraad ah: Isticmaal xiriiriye calaamadeysan bit.ly si aad ula socoto oo aad uhesho url-gaaga.
Ama qof ka mid ah shaqaalahaaga ha ku noolaado-tweet, ama jadwal u samee tweets si aad u baxdo inta lagu jiro webinar. Waxaad heli doontaa kaqeybgal bulsho oo dheeri ah inta lagu gudajiro dhacdada.
Hayso hashtag u heellan dhacdada oo u oggolow ka qaybgalayaasha inay ogaadaan si ay ula socdaan wadahadalka.
Hagaag, waa taa, dadweynow. Waxaan rajeynayaa in talooyinkan fudud ay kaa caawin doonaan dhiirrigelinta websaydhkaaga mustaqbalka!
Tags: maalinta ugu fiican ee la helo webinarmaalmaha ugu wanaagsan ee kor loogu qaado webinarwaqtiga ugu fiican ee lagu helo webinarsiyaabaha ugu wanaagsan ee kor loogu qaado webinaroctopus maskax badansida loo kobciyo webinarsida loo hormariyo websaydhkaagaSuuqgeynta Webinardiyaarsosiyaabaha kor loogu qaado webinardhiirrigelinta webinargoobaha kor u qaadista webinar
20, 2013 at 9: 06 AM
Tilmaamo yaab leh!
Jan 17, 2014 saacadu markay ahayd 8:34 PM
Farriin weyn Jenn .. Runtii wargelin .. Waad ku mahadsantahay wadaagista!
Jenn, runtii waan ku riyaaqay qoraalkaaga. Khibradeyda webinars jibes inta badan waxaad tiri. Waan xiiseynayaa, si kastaba ha noqotee, si aan u ogaado sida aad ugu soo gabagabeysay in inta badan diiwaangeliyayaashu ay isdiiwaan geliyaan usbuucii la soo dhaafay ka hor webinar. Waxaan badiyaa dirnaa casuumaadaha 2-3 toddobaad kahor, iyo diiwaangelinteenna badankood waxay yimaadaan isla markaaba ka dib casuumaadda ugu horreysa. Waxaan jeclaan lahaa inaan waxbadan ka maqlo khibradaada.
Haye Ben! Waad ku mahadsantahay faalladaada iyo ra'yigaaga. Xaqiiqdii waxaan ka helay xogta ku saabsan isdiiwaan gelinta warbixintii websaydhka ee ON24: http://www.on24.com/wp-content/uploads/2013/02/ON24_Benchmark_V8.pdf. Waxaan sidoo kale aragnaa qulqulka markii aan dirno emaylkii ugu horreeyay. Laakiin, waxaan sameeyay xisaabta, iyo webinar-kii ugu dambeeyay ee aan qabannay ayaa dad badani isdiiwaangeliyeen inta lagu jiro usbuuca ka badan kuwa isdiiwaangaliyay isla markii ay e-maylku baxeen. Waad ku mahadsantahay mar kale faallooyinkaaga waxaan rajeynayaa inay wax walba si fiican u socdaan!
Tilmaamo aad u fiican. Waxaan martigalinayaa webinarkeyga ugu horeeya 2 todobaad gudahood sidaa darteed waan hubaa inaan isticmaali doono talooyin badan oo badan intii aan kari karo.
Jun 14, 2014 saacadu markay ahayd 1:47 AM
Tilmaamo fiican! Xaqiiqdii, mid ka mid ah liistada ugu wanaagsan ee talooyinka dhiirrigelinta websaydhka ee aan ku soo arkay cilmi-baadhistayda! Xiiso leh inkasta oo sida qaar u dhihi doonaan marwalba ha ka dhigno dib u soo celinta websaydhkaaga. Khubarada qaar waxay dhahaan markay dhagaystayaashaadu ogaadaan inay jiri doonto ku celis la diyaarin karo, casharro xaadiritaan toos ah.
Oktoobar 7, 2014 at 7:45 PM
Tani waxay ahayd maqaal aad u wanaagsan
Nov 6, 2014 saacadu markay tahay 5:45 PM
Waxaan qorsheyneynaa inaan qabanno webinar dabayaaqada bishaan. Waxaan u adeegsan doonaa talooyinkaan si aan ugu diyaar garowno.
Waxa run ahaantii fiicnaan lahaa waa haddii aad dhajin karto jadwalka udiyaarinta webinar.
Nov 7, 2014 at 11: 08 AM
Richard, taasi waa fikrad aad u fiican! Taas ayaan ku ridi doonaa safkeena. Mahadsanid!
post fiican !!!
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helay qoraalkaaga! Waxaan hadda bilaabaynaa inaan ku fidinno adeegyada waxbarashada websaydhka websaydhka ah oo run ahaantii ma hayno wax tilmaam ah meesha laga bilaabayo! Miyaad qabataa latalin toos ah ama ka caawisaa wax sidan oo kale ah? Waxaan nahay shirkad tiknoolajiyada Apple ka taageerta iyo waxbarashada halkan bartamaha Florida.
Halye Terry! Waxaan macluumaadkaaga u gudbin doonaa Jenn oo tan qoray oo naga caawinaya dhamaan websaydhadeena!
Jul 4, 2015 markay tahay 6:12 PM
Waad ku mahadsantahay qoraal xiiso leh. Waxaan arkaa inaadan xusin fiidkii webinarrada.
Hadday tahay ganacsi guri noocyo ah miyaanay noqon lahayn wakhti fiican oo goorma iyo maalmaha aad soo jeedin lahayd
Jul 19, 2016 markay ahayd 11:10 AM
Tilmaamo waaweyn Jenn! Ilaa hadda tani waxay ahayd qoraalkii ugu macquulsanaa ee la xiriira webinar ee aan ka helay Google! Kuwa kale kamay koobnayn sida kaaga oo kale. Waad ku mahadsan tahay macluumaadka!
Jul 19, 2016 markay tahay 2:14 PM
Aad ayaad u mahadsantahay, Iris! Waxaan ubaahanahay inaan cusbooneysiiyo sanadka 2016, laakiin waxaan dhihi lahaa kuwani waa talooyin aan waqti lahayn oo loogu talagalay dhiirrigelinta webinar. Fadlan ii sheeg haddii aad wax su'aalo ah qabtid! Waan ku faraxsanahay inaan caawiyo.
Aug 31, 2018 at 10: 01 AM
Macluumaad weyn halkan Jenn. Waxaan sidoo kale arkay dad ku xayeysiinaya mareegtooda warbaahinta bulshada; Facebook oo ah kan ugu weyn uguna wanaagsan. Waxaad ku samayn kartaa koontadaada shakhsi ahaaneed ama aad sameysan kartaa koonto ganacsi oo aad ku maamuli kartaa xayeysiisyada warbaahinta bulshada ee lacagta lagu bixiyo. Waad ku mahadsantahay wadaagistaada!